China Frozen Yakabikwa Nyuchi Rurimi fekitori uye vagadziri | Huikang
Chikafu chakaomeswa chakakamurwa kuita chikafu chakatonhora uye chikafu chakaomeswa. Chikafu chakaomeswa chiri nyore kuchengetedza uye chinoshandiswa zvakanyanya mukugadzirwa, kutakurwa uye kuchengetwa kwechikafu chinoparara senyama, huku, zvigadzirwa zvemumvura, mukaka, mazai, miriwo nemichero; zvine hutano, zviri nyore, zvine hutano uye zvine hupfumi; Iko kudiwa kwemusika kwakakura, inobata chinzvimbo chakakosha munyika dzakabudirira, uye iri kukura nekukurumidza munyika dzichiri kusimukira.
Chilled chikafu: haidi kuve nechando, ndicho chikafu icho tembiricha yechikafu chakadzikiswa kuti chisvike panotonhora uye chengetedzwa pane ino tembiricha.
Chikafu chakaomeswa: Chikafu chinochengetedzwa patembiricha pazasi pechando mushure mekuomeswa nechando.
Chikafu chinotonhorera uye chikafu chakaomeswa chakabatanidzwa zvinonzi chikafu chakaomeswa, izvo zvinogona kuganhurwa muzvikamu zvishanu: michero nemiriwo, zvigadzirwa zvemumvura, nyama, huku ne mazai, mupunga uye zvigadzirwa zveNoodle, uye chikafu chakareruka zvinoenderana nezvakagadzirwa uye mapatani ekushandisa.
Francis Bacon, munyori wezvechiBritish wezana ramakore rechi17 uye muzivi, akaedza kuisa chando mukhuku kuti chive chando. Zvisingatarisirwi, akabata dzihwa ndokukurumidza kurwara. Kunyangwe kusati kwamboedzwa kwakaipa nebhekoni, vanhu vaiziva kuti kutonhora kwakanyanya kunogona kudzivirira kudya nyama kubva "pakuipa." Izvi zvakakonzera varidzi vepfuma kumisikidza dzimba dzechando mune yavo nzira inogona kuchengetedza chikafu.
Hapana chimwe cheidzi kuedza kwekutanga kwechando chikafu chakabata kiyi yedambudziko. Haisi iyo degree rekugwamba, sezvo iri iyo yekumhanyisa kwechando, ndiyo kiyi yekumisikidza nyama. Pamwe munhu wekutanga kuziva izvi aive mugadziri weAmerica Clarence Birdseye.
Yakanga isiri kusvika kuma1950 nema1960, apo mafiriji emumba paakatanga kufarirwa, chikafu chando chakatanga kutengeswa muhuwandu hwakawanda. Nguva pfupi yapfuura, iro rakakurumbira tsvuku, chena, uye bhuruu kurongedza kweBoz Aiyi kwaive muzvitoro munzvimbo zhinji dzepasi uye kwakava kunozivikanwa kuona.
Makore mashoma mushure meHondo Yenyika I, Bozee akaita kuverenga kwemiti yemusango achifamba kuLabrador Peninsula muCanada. Akaona kuti kunze kwaitonhora zvekuti hove dzakapindwa nechando zvakanyanya mushure mekunge abata hove. Aida kuziva kana iyi yaive kiyi yekuchengetedza chikafu.
Kusiyana neBacon, Birdseye aigara munguva yefriji. Mushure mekudzokera kumba muna 1923, akaedza nefiriji mukicheni yake. Tevere, Boz Aiyi akaedza kuomesa mhando dzakasiyana dzenyama munyama hombe inotonhora. Birdseye akazopedzisira aziva kuti nzira yekumhanyisa-chena yekumesa chikafu kusvina nyama pakati pematare maviri echando akaomeswa. Pakazosvika ma1930, aive akagadzirira kutanga kutengesa chikafu chakaomeswa chakagadzirwa mufekitori yake yeSpanish, Massachusetts.
Kuna Boz Aiyi, chikafu chakaomeswa nechando chakakurumidza kuita bhizimusi hombe, uye kunyangwe asati agadzira iyo inoshanda-mbiri-ndiro kutonhora maitiro, kambani yake yaive yakaomeswa matani mazana mashanu emichero nemiriwo pagore.
Chigadzirwa sumo Mbishi zvigadzirwa zvinobva kunzvimbo dzekuuraira uye mabhizimusi ekunyoresa kunze kwenyika kuChina. Inonyanya kugadzirwa muChina.
Chigadzirwa chigadzirwa Slice uye dice, pfeka tambo
Chigadzirwa maficha Iyo ine yakasarudzika kuravira kwemombe rurimi
Nyorera chiteshi Kudya, zvitoro zviri nyore, mhuri Shandisa nzira: Fry uye grill.
Mamiriro ekuchengetedza Kuchengetedzwa kwepasi pasi -18 ℃
Rurimi rwemombe runogona kusvibiswa, kukangwa, kana marinated. Ndimi dzinotengeswa mune mimwe misika dzakagadzirira kudyiwa, asi mitauro mbishi, inopfungaira kana ine munyu wakaomarara inowanzo kuwanikwa. Mushure mekubika, zvakanaka kungave kunopihwa kuchipisa kana kutonhora, uine kana usina mwaka. Mitauro ine munyu inowanzo bikwa uye yakatemwa neakasvinwa muto. Ivo vanowanzo kupihwa kutonhora. Mitauro mbishi inogona kubikwa newaini kana kufashaidzwa uye kushumirwa nezvimwe zvakasiyana. Rurimi rwemombe uye rurimi rweveve ndiyo inonyanya kufarirwa, senge rurimi rwemombe mumuto.
Zvadaro: Frozen Diced Cheka Karoti
Kurumidza-Frozen Nyuchi Tendon Skewers